Yini ebingenzeka uma isiphepho selanga sihlasela uMhlaba? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yini ebingenzeka uma isiphepho selanga sihlasela uMhlaba?
Namuhla sincike kugesi ngayo yonke into, ngakho-ke mhlawumbe kuzodingeka sizibuze ukuthi sizokwazi yini ukuphila impilo ejwayelekile uma isivunguvungu selanga sihlasela uMhlaba. Kungaba nzima, akunjalo? Yize ngenhlanhla akukho okukhombisa ukuthi into efana nale izokwenzeka eminyakeni embalwa ezayo, umongameli wase-United States, uBarack Obama, isiqalile ukuthatha izinyathelo zokuzivikela.
Kodwa kungani? Yini ebingenzeka eMhlabeni uma isiphepho selanga siyishaya?
Iplanethi yethu "ivikelwe" ngemigqa eminingi engabonakali esuka maphakathi nayo iye emkhawulweni lapho umoya welanga ukhona. Le migqa ibizwa ngokuthi Amandla kazibuthe omhlaba noma inkambu ye-geomagnetic. Lokhu kuguquka ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yokuhamba kwama-alloys ensimbi ancibilikile atholakala engxenyeni engaphandle yomhlaba. Ngokwenza kanjalo, isigxobo sasenyakatho siyahamba, yize sihamba kancane kangangoba asisiphoqeleli ukuthi silungise izinkampasi zethu njalo. Eqinisweni, ukuze zombili izingongolo zihlehle, kudlula amakhulu ezinkulungwane zeminyaka.
Kuthiwani ngeLanga? Inkosi yethu yezinkanyezi isinikeza ukukhanya nemfudumalo, kanye nombukwane wobuhle obungenakulinganiswa: Izibani ZaseNyakatho. Kodwa ngezikhathi ezithile kuba neziphepho zelanga, okusho ukuthi ukuqhuma kwenzeka emkhathini welanga, kuphuma izinhlayiya ezinamandla ezingena kumandla kazibuthe. Lesi yisimo esingenakugwenywa, kepha kungabikezelwa ukunciphisa umonakalo ongaba khona.
Uma kwenzeka umcimbi onjalo wenzeka, Zonke izinhlelo zomhlaba jikelele (GPS), i-Intanethi, ucingo, kanye nanoma yiluphi olunye uhlelo lwe-elekthronikhi luzothinteka. Ngamafuphi, sizoba nezinkinga eziningi ukuqhubeka nokuhola impilo esiyiphilayo, yize bekungezukuba okokuqala. Owokugcina kwakungo-1859, ukuthi yize ngaleso sikhathi babengenayo i-Intanethi noma i-GPS, kwakusanda (ngo-1843) ukuthi kwakhiwe amanethiwekhi we-telegraph futhi bahlukumezeka kaningana.
Uma kwenzekile namuhla, umonakalo ububaluleke kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Yini ebingenzeka uma isiphepho selanga sihlasela uMhlaba?
I-VIDEO: Isiphepho esinomdlandla sikhanyisa intaba-mlilo iPopocatepetl